Guddiga Gurmadka iyo Taakulaynta Qaxootiga oo 500 qof ambabixiyay. – SBC
Guddiga Gurmadka iyo Taakulaynta Qaxootiga oo 500 qof ambabixiyay.
Posted by SBC Editor on August 1, 2015 Comments
Guddiga taakulaynta iyo gurmadka dadka soomaaliyeed ee ka soo cararaya dagaalada dalka yemen ayaa 500 qof u ambabixiyay magaalooyinka Hargaysa iyo Muqdisho, kuwaasoo qayb ka haa dadkii la socday markabka Nawaal 3 oo shalay dekeda Bosaso keenay 2500 Qof.
Guddoomiyaha Guddiga Taakulaynta Qaxootiga yemen Sheekh Axmed Yuusuf Daad, oo ay weheliyeen qaar ka tirsan culumadda puntland, guddiga gurmadka qaxootiga somaliya, wasiir k/xigeenka arrimaha gudaha iyo Maamulka gobolka Bari ayaa maanta shir jaraa’id oo ay ku qabteen xerada qaxootiga ee Bosaso ayuu ku sheegay in 25 baabuur oo ay saran yihiin 500 qof ay u ambabixiyeen magaalooyinka Muqdisho iyo Hargaysa.
“Dadka aanu ambabixinay waxay isugu jiraan haween, caruur iyo dad waayeel ah, qofka kasta waxaanu gacanta ka saarnay $120 oo jid mar ah, waxaanu saarnay baabuur gaarsiisa magaalooyinka muqdisho iyo Hargaysa” ayuu yiri sheikh Axmed Yuusuf.
Sheekh Daahir Aw-cabdi oo ka mid ah Guddiga culumadda puntland ee ka shaqeeya Caawinta iyo taakulaynta Qaxootiga ka soo cararay dalka yemen ayaa u mahadnaqay Shirkadaha iyo dadka soomaaliyeed ee gacanta ka gaystay caawinta qaxootiga ka imaanay dalka yemen.
Sheekh Daahir Aw-cabdi wuxuu faahfaahin ka bixiyay tiradda qaxootiga soo gaartay shalay dekeda bosaso, isagoo sheegay in dadka yimid ay u badnaayeen caruur iyo haween.
“ Markabkaas waxaa la socday 2543 qof, caruur waxaa ahaa 981, haweenkuna waa 893 qof, raguna waa 669 isugu jira waayeel iyo dhalinyaro “ ayuu yiri Sheekh
Shiikh Nuur Baaruud oo ah Guddoomiyaha Gurmadka Qaxootiga Qaranka ayaa ku ammaanay dawladda iyo Shacabka Puntland doorka muuqda ee wax u qabashada dadkan walaalahooda ah ee u baahan garab istaaga, waxaa kaloo uu xusay in wadashaqayn dhinacyo badan ay kala dhaxayso guddiga gurmadka qaxootiga ee puntland.
“ anigoo ku hadlaya magaca guddiga badbaadinta qaxootiga ee somaliya, waxaan u uga mahadcelinayaa shacabka iyo dowladda puntland sida quruxda badan ay ugu adeegeen dadkii qaxootiga ahaa ee shalay lag soo dejiyay dekeda Bosaso” ayuu yiri sheikh Nuur baaruud
Gees kale. Qaar kamid ah dadkii maanta la ambabaxiyey ayaa u mahadceliyey dawladda,shacabka iyo Guddiga gurmadka iyo taakulaynta Qaxootiga ee u raray deegaanadooda, islamarkaana ka bixiyay kharashkii iyo jidmarkii.
Wasiir kuxigeenka Arrimaha gudaha dawladda Puntland Cabdullaahi Xaashi Qoob-deero ayaa isna dhankiisa ugu baaqay beesha caalamka iyo muslimiinta iney ka qeybqaataan taakuleynta dadka tabaaleysan ee kazoo cararay colaada Yemen.
Wasiirku wuxuu sheegay in dadka ka soo cararay dagaalada dalka yemen ay u baahan yihiin afar waxyaabood oo nolosha bani’aadamka asaasi u ah kuwasoo kala in ay helaan dib u dejin, quudin joogta ah inta ay dalka kala qabsanayaan, Caafimaadk iyo Waxbarsho.
Markabka Nawaal 3, waa markii saddexaad ee uu dekeda Bosaso ka soo dejiyo kumaankun qof oo Somali iyo yemeniin isugu jira oo ka soo cararay dagaalada iyo colaada ka socota dalka yemen, Waxaana shalay galabnimadii uu keenay dad ka badan 2500 Qof oo Somali iyo yeminiin ,kuwasoo la dejiyay xerada dowladu u astaysay qaxootiga.